Maxaa ka soo kordhay wararka Lukaku la xiriirinaya inuu ku laabanayo kooxda Chelsea? – Gool FM
Dajiye June 1, 2021
(Milano) 01 Juun 2021. Maamulka Inter Milan ayaa niyadjab ku riday kooxda Chelsea oo xiiseynayay inay la saxiixdaan weeraryahakooda horey ee Romelu Lukaku, kaasoo uu si xoogan u doonayo tababare Thomas Tuchel.
Sida laga soo xigtay wargeysyada Talyaaniga ah, maamulka kooxda Inter ayaa doonaya inay ku iibiyaan in ka badan hal ciyaaryahan oo kooxda ka mid ah, qiimo dhan 80 million euros, sababo la xiriira deymaha ay kooxda ku leedahay milkiilayaasha haatan.
Sida laga soo xigtay wakaalada wararka Talyaaniga ee “ANSA”, Romelu Lukaku ayaan ka mid noqon doonin ciyaartoyda ka tagi doonta kooxda xagaaga soo aadan iyo inuusan iib aheyn cadaadis kasta oo jira.
Romelu Lukaku ayaa loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah sababihii ugu waaweynaa uu ugu hoggaamiyay Antonio Conte kooxda Inter Milan ku guuleysiga horyaalka Talyaaniga xilli ciyaareedkii dhawaan la soo xiray, isaga oo dhaliyay 24 gool isla markaana caawiyay 11 gool kale, kaddib 36 kulan horyaalka Serie A uu ciyaaray.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Chelsea ayaa ku qasbanaan doonta inay fiiriso badel kale ee la heli karo, waxayna wararka tilmaamayaan in saraakiisha kooxda ay xiiseynayaan saxiixa gooldhaliyaha ugu sarreeya Borussia Dortmund ee Erling Haaland.